‘माइतीघरबाट सरकारले पाठ सिक्यो, अरुले पनि सिकुन्’ – DK
Home / समाचार / ‘माइतीघरबाट सरकारले पाठ सिक्यो, अरुले पनि सिकुन्’
‘विधि निर्माणको सर्वोच्च थलो संसदलाई बनाउनुपर्छ’
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली विदेश मामिलाका मात्रै जानकार नभएर घरेलु राजनीतिका समेत चिरपरिचित विश्लेषक हुन् । विगतमा राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामा आउने राजनीतिक विश्लेषणहरुले ज्ञवालीलाई नेतासँगै विश्लेषकको समेत पहिचान दिएको हो ।
आन्तरिक राजनीतिका विभिन्न पाटापक्षहरु केलाउन सक्ने मन्त्री ज्ञवालीसँग हामीले शुक्रबार सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमै घरेलु राजनीतिका विषयमा केही जिज्ञासा राख्यौं ।
विगतमा मिडियासँग नजिक रहेर नेपाली मिडियालाई पर्गेल्दै आएका परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग हामीले मिडिया काउन्सिल विधेयकका बारेमा पनि प्रश्न सोध्यौं । जवाफमा केही आक्रामकरुपमा प्रस्तुत हुँदै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘कतिपय सम्पादकहरुलाई निश्चित विचारधाराको लास चाहिएको छ ।’
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएका अधिकांश विधेयकमा एकपछि अर्को विवाद देखापर्‍यो । गुठी विधेयक त फिर्ता नै लिनुपर्‍यो । किन यसो भएको होला ?
मन नपरेको सरकारले गरेको हरेक कुराको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पनि होला । तथापि त्यो मतले संगठित आकार लिन सकेको थिएन । तर, गुठी विधेयकमा सडकमा आएका जनतालाई अनेक लाञ्छना लगाएर तपाईहरुले नै माइतीघर मण्डलामा जनसागर उर्लिने वातावरण बनाइदिएको होइन र ?
यसबाट के पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने मैले अगाडि नै बताइसकेँ । तर, मैले के कुरा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु भने एउटा जबरजस्त आग्रह छ । आजकै केही अखबार हेर्नुस् । हिजो भएको घटनामा सबैको नाम आउँछ तर, आफूलार्ई मन नपरेको मन्त्री त्यहाँ थिए वा बोले भन्नेसम्म पनि समाचार आउँदैन । यो आचारसंहिताभित्र पर्छ र ?
गुठी विधेयकमा त जनताको आवाज सुन्नुभयो । तर, मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सूचना प्रविधि र सुरक्षा परिषदसम्बन्धी विधेयकबारे पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छ । यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी लिएको छ ?
उदाहरणका निम्ति, एउटा कुनै प्रोजेक्टबारे लगातार फलोअप न्यूज आउँछ । तर, एउटा बिहान पत्रिकालाई ज्याकेट विज्ञापनले ढपक्क छाप्छ र त्यसपछाडि समाचार गायब हुन्छ । हामी यो समस्याबाट गुज्रिरहेका छौं कि छैनौं ? आज ‘हेट स्पिच’ अर्थात मिडियामार्फत साम्प्रदायिक, लैंगिक वा अन्यखालका विद्वेष बढाउने संसारभरको प्रवृत्ति भएको छ । यही कारण मिडियालाई कसरी विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउने भन्ने बहस चलिरहेको छ । यसबाट नेपाल अलग हुन सक्दैन ।
केही मान्छेको आग्रह, पूर्वाग्रह पनि होला । तर, सबैको त छैन । सबै कसरी प्रभावित भए त ? कहीँ न कहीँ समस्या सरकार वा तपाईहरुमा पनि त होला नि ?
जे होस्, गुठी विधेयकमा सरकारपछि हटेकै हो । यसलाई लिएर कतिपयले दुई तिहाईको सरकारलाई झड्का लाग्यो, अरु असर पनि देखिन सक्छन् भनेका छन् । तपाई के भन्नुहुन्छ ?
मैले यसबीचमा आएका विभिन्न प्रतिक्रियाहरु हेरेँ । बगिरहेको नदीमा जो कसैले पनि हात धुन पुग्छ । पूर्वराजावादीहरुले पनि हात धोएको देखेँ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको डब्डबाएका आँसुबाट संस्कृतिप्रति चिन्ता देखियो । डा. बाबुराम भट्टराईले हौसिएर नेवा कलर दिने कोसिस गर्नुभयो । र, फेरि सुसुप्त भइसकेको सामाजिक सद्भावमा मट्टीतेल खन्याउने कोसिस गर्नुभयो । अरु केही साथीहरु, जसले व्यक्तिगत आह्वानमा सय जना मान्छे जुटाउन सक्नुहुन्न, उहाँहरुले आफ्नो अनुकुल व्याख्या गरिरहनुभएको छ ।
लामो द्वन्द्व र संक्रमणकालका कारण नेपाल यहीँ कतै हराएको थियो । हाम्रो पहुँच बढीमा छिमेकी देश र राष्ट्रसंघ महासभा भन्दा पर जान सकेको थिएन । नेपाल के हो ? के चाहेको छ ? कुन दिशातिर जाँदैछ भनेर हामीले आफूलाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा प्रस्तुत गर्न सकिरहेकै थिएनौं । गएको एक वर्षमा हाम्रो प्रयास त्यसमै रह्यो । कतिपय मान्छेलाई यो कुरा पनि मन परेको छैन । अप्रिय टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ । यो सबैबाट कुनै न कुनै रुपमा अस्थिरता फैलाउने एउटा प्रयास जारी भएको देखिन्छ ।
कतिपय पूर्वमन्त्रीहरुका अनुसार हाम्रो कानुन निर्माणको जुन प्रचलन छ, त्यसमा राजनीतिक नेतृत्वको ओनरसीप कम हुन्छ । यसले पनि केही समस्या भएको हो कि ?
समृद्धिलाई मूल नारा बनाएर आएको सरकारले डेढ वर्ष बिताएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर असन्तुष्टिका स्वर चर्कै सुनिएका छन् । अब यो ठाउँमा सच्याएर जानुपर्नेरहेछ भन्ने लाग्छ ?
दुई तिहाईको सरकार भएकाले जनताको अपेक्षा ठूलो छ, जुन स्वाभाविक पनि हो । जनताले अझै छिटो परिणामको अपेक्षा गरेका छन् त्यो स्वाभाविक हो । त्यसलाई पनि ध्यान दिन्छौं ।
Related ItemsDigital KhabarMaitghar MandalaNewsPoliticesPradip Gyawali
← Previous Story मनसुन सुरु भएको औपचारिक घोषणा, चार वटा प्रदेशमा कम पानी पर्ने
Next Story → एप्सबाट हुने आम्दानीमा एप्पल अगाडि, गुगलको हिस्सा कति ?